Bamawl - HR Integrated System | ERP | Payroll System in Myanmar
BAMAWL HR ဘက်ပေါင်းစုံစနစ်
၀န်ထမ်းအားလုံး၏ အချက်အလက်များကို တစ်နေရာထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။ ၀န်ထမ်းများ၏ မှတ်တမ်းမှတ်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၏လုပ်ငန်းများအား ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
Welcome to Bamawl HR
We've received your requestaBamawl Hr Demo and someone from our team will be in touch soon.
Thank you and enjoy the Bamawl Hr Integrated System!
Employee Log File
Working Shift Roster
BAMAWL HR ၀န်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
Why using BAMAWL?
ကွန်ပြူတာ၊မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြု ၍ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
လစာပေးချေမှုစာရင်းစာရွက်များ၊ ခွင့်စာရွက်များ အစီရင်ခံစာများ စသည့် စာရွက်စာတမ်းများအား လျှော့ချနိုင်ပါသည်။
နှစ်စဥ်လစဥ်၀င်ငွေ ခွန်တွက်ချက်ခြင်းများ အစိုးရမှချမှတ်ထားသော SSB format များကို လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
BAMAWL HR system အား fingerprint စက်၊ Face scan စက်နှင့်time card ဖြင့်လည်း ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
HR ၀န်ထမ်းများအား အထက်လူကြီးမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော အချက်အလက်များကိုသာ မြင်နိုင်သည့်အတွက် အလုပ်များအား ခွဲဝေလုပ်ဆောင်စေနိုင်ပါသည်။
HR system သုံးဖို့ စဥ်းစားနေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကော၊ HR နယ်ပယ်ထဲ၀င်မယ့် လူငယ်တွေအတွက်ရော HR System သုံးတော့မယ်ဆို ဘာတွေသိထားသင့်လဲ၊ System တစ်ခုပြောင်းသုံးဖို့အတွက် security မြင့်တဲ့ System ဘယ်လိုရွေးချယ်သင့်လဲ စတဲ့ HR System နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ...
Please go to the webinar page where our product explanation videos are uploaded.
Let us know what you would like to hear from us about. Here's you go to read regular news and updates on our work.
3 in 1HR Integrated System
၀န်ထမ်းများ၏နေ့စဥ် ရုံးတက်/ရုံးဆင်းချိန်များ၊ ခွင့်၊ အလုပ်ပိတ်ရက်များအား ၀န်ထမ်းအလုပ်ချိန်ပြဇယားတွင် ရှင်းလင်းစွာ စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၀န်ထမ်းများ၏လစာ၊ ၀င်ငွေခွန်များတွက်ချက်ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ကြေး၊ လစာဖြတ်တောက်ခြင်းစသည့်တွက်ချက်ခြင်းများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။
Bamawl HR MAIN FEATURE
Schedule/ Plan Maker
Audit Trails(Employee Log File)
Meeting Room Reservation /
More Reasons to love Bamawl HR
စည်းမျဥ်း စည်းကမ်းနှင့်အညီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း
လုပ်ငန်းမှချမှတ်ထားသော စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Cloud-based system ဖြစ်သည့်အပြင့် ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားသောသူများသာ system အတွင်း၀င်ရောက်နိုင်ပါသည်။
၀င်ငွေခွန် တွက်ချက်ခြင်းနည်းလမ်းများ၊ ခွင့်များကို မြန်မာအလုပ်သမားဥပဒေ နှင့်အညီလုပ်ဆောင် ထားသည့်အတွက် အခွန်နှင့်ပတ်သတ်သော မှားယွင်းတွက်ချက်မှုများ ကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။
HR Assistant တစ်ဦးကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း
BAMAWL system အသုံးပြု၍ HR အလုပ်များစွာကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်ပေးသဖြင့် အချိန်သက်သာရုံသာမက အမှားများလုပ်ခြင်းကိုလည်း လျော့နည်းစေပါသည်။
January 2018 Bamawl Old Version Brycen Myanmar Use within the company
April 2018 Bamawl Old Version First Customer Start
April 2019 Bamawl Old Version Survey System Start
August 2019 Bamawl Old Version Car Booking System Start
December 2019 Bamawl Old Version Meeting Room System Start
September 2021 Bamawl New Version New HR Sales Start
December 2021 Bamawl New Version Schedule & Car Booking & Meeting Room Integrated System Start
အမှတ်(၁၇၈/၁၈၀) ၊ ၃၆လမ်း အလယ်ဘလောက်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
(+95) 09 254045384